Ọnụ Ọgụgụ 8 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ọnụ Ọgụgụ 8:1-26
8 Jehova wee gwa Mozis, sị: 2 “Gwa Erọn okwu, sị ya, ‘Mgbe ọ bụla ị mụnyere oriọna ndị ahụ, oriọna asaa ahụ ga na-enwu n’ihu ebe ihe ndọba oriọna ahụ dị.’”+ 3 Erọn wee malite ime otú ahụ. Ọ mụnyere oriọna ya dị iche iche ka ha na-enwu n’ihu ebe ahụ ihe ndọba oriọna+ ahụ dị, dị nnọọ ka Jehova nyere Mozis n’iwu. 4 Otú a ka e si rụọ ihe ndọba oriọna ahụ. E ji ọlaedo kpụọ ya. A kpụrụ ya akpụ,+ ọbụna akụkụ ya abụọ na ifuru ya. Dị ka Jehova gosiri Mozis n’ọhụụ,+ otú ahụ ka o mere ihe ndọba oriọna ahụ. 5 Jehova wee gwa Mozis ọzọ, sị: 6 “Si n’etiti ụmụ Izrel kpọrọ ndị Livaị, meekwa ka ha dị ọcha.+ 7 Nke a bụkwa ihe ị ga-eme ha iji mee ka ha dị ọcha: Fesa ha mmiri na-asachapụ mmehie,+ ha ga-eji agụba kpụchaa ajị dị n’ahụ́+ ha dum, ha ga-asụkwa uwe+ ha ma mee onwe ha ka ha dị ọcha.+ 8 Mgbe ahụ, ha ga-akpụrụ nwa oké ehi,+ werekwa àjà ọka*+ ya nke bụ́ ntụ ọka e gwere nke ọma, nke a gwara mmanụ, ị ga-akpụrụkwa nwa oké ehi ọzọ maka àjà mmehie.+ 9 Ị ga-akpọta ndị Livaị n’ihu ụlọikwuu nzute ma kpọkọta nzukọ ụmụ Izrel dum.+ 10 Ị ga-echekwa ndị Livaị n’ihu Jehova, ụmụ Izrel ga-ebikwasịkwa+ ndị Livaị+ aka n’isi. 11 Erọn ga-eme ka ndị Livaị gaa ihu na azụ n’ihu Jehova dị ka àjà a na-efegharị efegharị+ nke si n’aka ụmụ Izrel, ha ga na-eje ozi Jehova.+ 12 “Mgbe ahụ, ndị Livaị ga-ebikwasị aka n’isi oké ehi ndị ahụ.+ E mesịa, chụọ otu n’àjà ka ọ bụrụ àjà mmehie, chụọkwa nke ọzọ n’àjà ka ọ bụrụ àjà nsure ọkụ a chụụrụ Jehova iji kpuchiere ndị Livaị mmehie.+ 13 Ị ga-eme ka ndị Livaị guzo n’ihu Erọn na ụmụ ya ndị ikom ma mee ka ha gaa ihu na azụ dị ka àjà a na-efegharị efegharị a chụụrụ Jehova. 14 Ị ga-esikwa n’etiti ụmụ Izrel kewapụta ndị Livaị, ndị Livaị ga-abụkwa nke m.+ 15 E mesịakwa, ndị Livaị ga-abata jewe ozi n’ụlọikwuu nzute.+ N’ihi ya, mee ka ha dị ọcha, meekwa ka ha gaa ihu na azụ dị ka àjà a na-efegharị efegharị.+ 16 N’ihi na ha bụ ndị e nyere enye, ndị e nyere m site n’etiti ụmụ Izrel.+ M ga-akpọrọ ha n’ọnọdụ ndị niile meghere akpa nwa, bụ́ ụmụ niile e bu ụzọ mụọ n’etiti ụmụ Izrel.+ 17 N’ihi na nwa ọ bụla e bu ụzọ mụọ n’etiti ụmụ Izrel bụ nke m, ma mmadụ ma anụmanụ.+ N’ụbọchị m gburu ụmụ niile e bu ụzọ mụọ n’ala Ijipt+ ka m doro ha nsọ ka ha bụrụ nke m.+ 18 M ga-akpọrọ ndị Livaị n’ọnọdụ ụmụ niile e bu ụzọ mụọ n’etiti ụmụ Izrel.+ 19 M ga-ewere ndị Livaị nye Erọn na ụmụ ya ndị ikom ka ha bụrụ ndị e nyere enye site n’etiti ụmụ Izrel,+ ka ha na-eje ozi dịịrị ụmụ Izrel n’ụlọikwuu nzute+ nakwa ka ha na-ekpuchiri ụmụ Izrel mmehie ha, ka a ghara inwe ihe otiti ọ bụla n’etiti ụmụ Izrel+ n’ihi ụmụ Izrel ịbịaru ebe nsọ ahụ nso.” 20 Mozis na Erọn na nzukọ ụmụ Izrel dum wee mee ndị Livaị otú ahụ. Dị ka ihe niile Jehova nyere Mozis n’iwu banyere ndị Livaị si dị, ọ bụ otú ahụ ka ụmụ Izrel mere ha. 21 Ndị Livaị wee mee onwe ha ka ha dị ọcha+ ma saa uwe ha, e mesịa, Erọn mere ka ha gaa ihu na azụ dị ka àjà a na-efegharị efegharị n’ihu Jehova.+ Erọn wee kpuchiere ha mmehie iji mee ka ha dị ọcha.+ 22 Ọ bụ mgbe e mesịrị nke ahụ ka ndị Livaị batara jewe ozi dịịrị ha n’ụlọikwuu nzute n’ihu Erọn na ụmụ ya ndị ikom.+ Dị nnọọ ka Jehova nyere Mozis n’iwu banyere ndị Livaị, otú ahụ ka e mere ha. 23 Jehova wee gwa Mozis, sị: 24 “Nke a bụ ihe metụtara ndị Livaị: Ọ bụ malite mgbe mmadụ gbara afọ iri abụọ na ise gbagowe ka ọ ga-esonye n’ìgwè na-eje ozi n’ụlọikwuu nzute. 25 Ma mgbe ọ gafere afọ iri ise, ọ ga-akwụsị iso ìgwè ahụ na-eje ozi, ọ gakwaghị eso ha na-eje ozi. 26 Ọ ga na-ejere ụmụnne ya ozi n’ụlọikwuu nzute site n’ịrụ ọrụ dịịrị ha, ma ọ gaghị eje ozi ọ bụla. Otú a ka ị ga-eme ndị Livaị n’ọrụ dịịrị ha.”+
Ọnụ Ọgụgụ 8